Snowflake Weißröckchen - ederede na ederede iji bipụta
Snowflake White uwe - ndetu na ederede
Mpempe akwụkwọ na ederede Snowflake White Skirt
Snowflake, White uwe mwụda,
kedu mgbe ị na-agba snow?
Ị bi n'ígwé ojii,
ụzọ gị dị ugbu a.
Biri na windo
ị mara kpakpando,
ese okooko osisi na akwukwo,
anyị na-amasị gị
Snowflake, ị na-ekpuchi anyị
ha na-ehi ụra n'enweghị nsogbu
na udo nke eluigwe.
Bịa anyị na ndagwurugwu.
Mgbe ahụ anyị na-ewu snowman
ma tụfuo obi ụtọ ahụ.
Weech von Weihnachtslied Snowflake Open Weißröckchen dị ka faịlụ dị egwu